Qarax Khasaare Gaystay oo Afgooye lagula Eegtay Ciidamo ka tirsan AMISOM – Radio Daljir
Maarso 12, 2016 8:55 b 0
Bacaadweyn, Maarso 12, 2016 (Daljir) —Wararka naga soo gaarayo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose, ayaa sheegaya in goor-dhow qarax miino ah lala eegatay ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya oo marayay Suuqa Degmada Afgooye.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa noca dhulka lagu aaso islamarkaana lagu qarxiyay Kolonyo Gadiid ah ay wateen Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo waqtigaas dhexmarayay Suuqa, Qaraxa ka dib Ciidamada ayaa hurgufay Rasaas dhalisay Khasaaro.
Inta la xaqiijiyay 8 qof oo labo kamid ah Ciidanka Dowlada yihiin ayaa ku dhaawacmay qaraxa miino iyo rasaasta ay fureen ciidanka Dowlada ee qaraxa la eegtay, waxaana xaalada Suuqa ay noqotay mid cakiran kadib markii uu qaraxu dhacay.
Goobta uu Qaraxa ka dhacay islamarkiiba waxaa gaaray Ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya,waxaana iminka goobta ka socdo Baritaano.
Majirto Cidka hadashay Qaraxa lala beegsaday Ciidamada Dowlada, Maamulka Degmada Afgooye iyo Saraakiisha Ciidanka Dowlada ayaan wali wax hadal kaso saarin Qaraxa waxaana wali socdo baaritaano lagu baadi gobayo Cidii ka danbeesay Qaraxa.
KENYA:Al-shabaab Awood ayey ku Leedahay Xeryaha Dhadhaab